Izinqolobane ZaseBaum Hedlund - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Abameli Babambana Phambi Kwesilingo Esilandelayo
Posted on December 11, 2018 by UGary Ruskin
Ngokuqulwa kwecala elilandelayo enkantolo yamacala omdlavuza weRoundup abekelwe uFebhuwari 25 eSan Francisco, abameli beMonsanto kanye nabamangali bayaphikisana nokuthatha imali engaphezulu kweshumi nambili emasontweni kaDisemba nangoJanuwari njengoba bephikisana ngokuthi icala kufanele zihleleke.
Abameli beMonsanto ngoDisemba 10 bafaka isiphakamiso sokuthi "kubuyiselwe emuva bifurcate" icala elilandelayo, U-Edwin Hardeman V. Monsanto (3: 16-cv-00525). IMonsanto ifuna ukuthi ijaji lilalele kuphela ubufakazi obugxile kunkambiso ethile yezokwelapha kuqala - ingabe ukhula lwalo olubulala ukhula lwadala umdlavuza wommangali - ngesigaba sesibili esizobhekana nesibopho seMonsanto kanye nomonakalo odingekayo kuphela uma ijaji litholwa ngummangali esigabeni sokuqala. Bheka Impikiswano kaMonsanto lapha. IJaji uChhabria unikeze isicelo sabameli bommangali ukuthi bavunyelwe kuze kube nguLwesine ukufaka impendulo yabo.
U-Edwin Hardeman nomkakhe bachitha iminyaka eminingi behlala endaweni engamahektare angama-56, okuyisiphephelo sangaphambilini sezilwane eSonoma County, eCalifornia lapho uHardeman wayehlala esebenzisa imikhiqizo yakwaRoundup ukwelapha utshani nokhula obukhule kakhulu kusukela ngawo-1980. Kutholwe ukuthi une-B-cell non-Hodgkin lymphoma ngoFebhuwari 2015, inyanga nje ngaphambi kokuthi i-International Agency for Research on Cancer imemezele ukuthi i-glyphosate iyingozi yomdlavuza womuntu.
Icala likaHardeman lakhethwa njengelokuqala ukuqulwa enkantolo yaseSan Francisco (esifundeni esiseNyakatho neCalifornia) phambi kweJaji uVince Chhabria. Ummeli u-Aimee Wagstaff waseDenver, eColorado, ungummeli wommangali ohola leli cala. Ummeli uBrent Wisner wenkampani yabammeli iBaum Hedlund eLos Angeles, kanye nommeli owahlonishwa ngokuhola ukunqoba empumelelweni yomlando ka-Agasti ka-Dewayne Lee Johnson behlula iMonsanto, bekulindeleke ukuthi basize ekuzameni leli cala kodwa manje sekuzoba nelinye icala okumele liqale ngoMashi. Leli cala nguPilliod, et al V. Monsanto eNkantolo Ephakeme Yase-Alameda County. Bona amadokhumenti ahlobene ku- IMonsanto Papers ikhasi eliyinhloko.
Umnikazi omusha weMonsanto uBayer AG akanelisekile ngokuthembela eqenjini lecala likaMonsanto elahlulwa yicala likaJohnson futhi liletha iqembu lalo lezokuvikela. Ithimba leBayer, elisize inkampani yaseJalimane ukunqoba amacala okulwa ne-Xarelto blood thinner, manje sekubandakanya uPamela Yates no-Andrew Solow we-Arnold & Porter Kaye Scholer noBrian Stekloff kaWilkinson Walsh Eskovitz.
Ukulalelwa kwezingqinamba ezithile kusethwe ecaleni likaHardeman likaFebhuwari 4, 6, 11, no-13 ngokukhethwa kwabasizi bejaji okuhlelelwe uFebhuwari 20. Ukuphikisana kokuvula kuzoqala ngoFebhuwari 25, ngokwesheduli yamanje.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker U-Aimee Wagstaff, Andrew Solow, U-Arnold & Porter, UBaum Hedlund, UBrent Wisner, UBrian Stekloff, UKaye Scholer, UPamela Yates, UWilkinson Walsh Eskovitz, Igazi le-Xarelto lincane